Kufamba Kwekutenda Kunotarisirwa Kukwira kune Vapfuuri Mamirioni maviri
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Kufamba Kwekutenda Kunotarisirwa Kukwira kune Vapfuuri Mamirioni maviri
nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
TSA Inotarisira Kuongorora Vapfuuri Mamirioni makumi maviri Panguva yeKutenda Kwekufamba
Gadzirira rwendo rweKutenda
United Stated Transportation Security Administration (TSA) yakaongorora nhamba yepamusoro yevafambi muzuva rimwe chete svondo rapfuura kubva pakatanga denda. Vari kutarisira nguva yakabatikana yeKutenda yekufamba, inoonekwa kubva munaNovember 19 kusvika Mbudzi 28.
tsa Vakataura kuti vane vashandi vakakwana kuti vabate vatyairi vanosvika miriyoni makumi maviri vanozofamba nepanzvimbo yavo yekutarisa chengetedzo panguva dzakatarwa dzekufamba. Zuva repamusoro rekufamba munhoroondo yeTSA raive Svondo mushure meKutenda muna 20 denda risati rasvika. Munguva iyoyo 2019 miriyoni vafambi vakaongororwa neTSA Staff.
Mazuva anonyanya kubatikana e Kuvonga kufamba iChipiri neChitatu pamberi peKutenda neChina uye Svondo mushure meKutenda.
TSA Administrator David Pekoske akati: "Tinofungidzira kuti kufamba kunogona kunge kuri padyo nedanho rekutanga denda zororo rino, uye isu tine vashandi uye takagadzirira vafambi vezororo. Takaisa matekinoroji anonatsiridza kugona kuona uye kuderedza kubata kumeso, uye zvakakoshawo kuti vafambi vagadzirire vaine matipi ekufamba kuti vanyatsoona chiitiko chekutarisa. Nehuwandu hwejekiseni hwejekiseni huri kuvandudzwa munyika yose uye kuvimba kukuru mukufamba kune hutano, kuchave nevanhu vakawanda vanofamba saka rongai mberi, rambai makasvinura uye itai hunyoro.
"Ini ndinokurudzira kuti vafambi vateerere gwara riri kupihwa nevakuru veTSA panzvimbo yekutarisa. Vanogona kunge vachikutungamirira kune mutsetse mupfupi kana kukutungamirira kune mumwe munhu ari kufamba zvishoma nezvishoma. Uye vangave vachikupa zano rinoderedza mukana wekuti uchada kunyaradzwa.”
TSA inokurudzira vafambi kuti vabvumire imwe nguva yekufamba kwezororo uye kusvika nekukurumidza kupfuura nguva. Vanopa mazano aya zvakare:
Vafambi, vashandi veTSA, uye vamwe vashandi vendege vanosungirwa kupfeka mask sekurairwa nemubatanidzwa wemasiki. Wese munhu ari munhandare dzendege, mabhazi nezviteshi zvechitima, mundege dzinotakura vanhu, zvifambiso zvevoruzhinji, njanji dzinotakura vanhu, uye mabhazi ari pamusoro penzira anoshanda munzira dzakarongwa anofanira kupfeka mask. Kana mufambi asina kuuya nemask, mukuru weTSA achapa mask kumunhu iyeye panzvimbo yekutarisa.
Gadzirira kuchengetedza paunenge uchirongedza uye ona kuti hapana zvinhu zvinorambidzwa mumukwende. Ziva kuti ndezvipi zvekudya zvinofanira kupinda mubhegi rakachekwa. Gravy, cranberry sauce, waini, jamu, uye kuchengetedza zvose zvinofanira kupinda muhomwe yakaongororwa, nokuti haisi yakasimba. Kana iwe uchikwanisa kuidira, kupfapfaidza, kuparadzira, kupomba kana kudurura, saka haisi yakasimba uye inofanira kurongedzerwa mubhegi rakatariswa. Senguva dzose, vafambi vanogona kuunza chikafu chakasimba senge makeke uye zvimwe zvakabikwa kuburikidza nekutarisa.
Zvakanaka kuunza hand sanitizer. TSA parizvino iri kubvumira vafambi kuti vauye nechigaba chimwe chete chemvura chekuchenesa ruoko chinosvika maounzi gumi nemaviri pamutakuri mumabhegi anotakurwa kusvika zvaziviswa. Vafambi vanogona kutarisira kuti midziyo yakakura 12 ounces ichada kuongororwa zvakasiyana, izvo zvichawedzera imwe nguva kune yavo yekutarisa ruzivo. Vafambi zvakare vanobvumidzwa kuunza zvipukupu zvedoro kana anti-bacterial wipes mukutakura, mabhegi akatariswa, kana zvese zviri zviviri.
Nyoresa kana kuvandudza yako TSA PreCheck® nhengo
Vanhu vakawana TSA PreCheck makore mashanu apfuura vave kukwanisa kumutsiridza hunhengo hwavo pamhepo pamutengo wakaderera. Vanhu vasina TSA PreCheck vanofanirwa kunyoresa izvozvi kuti vawane mabhenefiti eTSA PreCheck, anowanikwa kune anopfuura mazana maviri endege dzeUS. Vafambi vakanyoresa muchirongwa chevafambi vanovimbika, seTSA PreCheck, havadi kubvisa shangu, malaptop, zvinwiwa, mabhandi uye majaketi akareruka. TSA PreCheck nhengo yakakosha ikozvino kupfuura nakare kose nekuti inoderedza kubata panguva yedenda uye inoisa vafambi mumitsetse yekuchengetedza ine vashoma vafambi uye inofamba nekukurumidza, izvo zvinokurudzira kushamwaridzana. Kuti uwane chirongwa chevafambi chakavimbika chinonyatsoenderana nezvido zvako zvekufamba, shandisa iyo DHS yakavimbika yekuenzanisa yekufambisa chishandiso.
Kumbira rutsigiro rwevafambi
Vafambi kana mhuri dzevatakuri vakaremara uye/kana mamiriro ekurapa vanogona kufonera TSA Cares runhare rwemahara pa855-787-2227 angangoita maawa makumi manomwe nemaviri vasati vabhururuka nemibvunzo chero yekuongorora, maitiro uye kuziva zvekutarisira pa security checkpoint. TSA Cares inorongawo rubatsiro panzvimbo yekutarisa.
Bvunza mibvunzo yako usati waenda kuairport
Bvunza TSA. Vafambi vanogona kuwana rubatsiro munguva chaiyo nekuendesa mibvunzo yavo nekutaura ku @AskTSA pa Twitter kana Facebook Messenger. Vafambi vanogonawo kusvika kuTSA Contact Center pa866-289-9673. Vashandi vanowanikwa kubva 8 am kusvika 11 pm pakati pevhiki uye 9 am kusvika 8 pm pakupera kwevhiki / mazororo; uye sevhisi yega yega inowanikwa maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva manomwe pasvondo.
Ita shuwa kuti une ID chaiyo
Vasati vaenda kunhandare yendege, vafambi vanofanirwa kuve nechokwadi chekuti vane zvitupa zvinogamuchirika. Identity verification inhanho yakakosha mukuchengetedza kuongorora maitiro.
Sechiyeuchidzo, kuziva kweruzhinji kwakakosha pakutsigira kuedza kweTSA kuchengetedza. Vafambi vanokurudzirwa kushuma zviitiko zvinofungirwa, uye yeuka: Kana Ukaona Chimwe Chinhu, Say Something™.